Ihe mere onye isi oche gị kwesịrị iji nọrọ na Social Media | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 16, 2014 Tọzdee, Ọktoba 16, 2014 Douglas Karr
You maara nke ahụ naanị 1 n’ime 5 CEO mepeela ọbụna akaụntụ mgbasa ozi mmadụ? N'uche m, nke ahụ bụ ihe na-eme ebere nke ukwuu nyere na isi ikike nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi ọ bụla n'oge a kwesịrị ịbụ ikike ha iji kpọtụrụ atụmanya, ndị ahịa, ndị ọrụ, na ndị na-etinye ego. Mgbasa mgbasa ozi na-enye ụzọ dị ịtụnanya iji rụọ ọrụ nke ọma ekwupụta ọhụụ na onye ndu ị chọrọ ka ndị ahịa hụ, ndị ọrụ gị hụrụ n'anya, na ndị itinye ego gị nwere okwukwe na!
Ihe omuma a site na Online MBA na-ejegharị na stats niile metụtara ihe ịga nke ọma dị ịtụnanya na ndị isi na-elekọta mmadụ na-enwe! N'ime ụlọ ọrụ 50 kachasị arụ ọrụ n'ụwa, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị isi ụlọ ọrụ nwere akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụghị ihe ijuanya na ihe ruru ọkara nke ụlọ ọrụ aha ha bụ etu ndị mmadụ si ele CEO anya! Ma ọkara nke ndị ahịa niile kwenyere na ndị isi na-anaghị etinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta agaghị akpọtụrụ ndị ahịa ha.
8 n'ime ndị ahịa 10 kwuru na ha ga-atụkwasị obi na ụlọ ọrụ nke onye isi ya na ndị otu na-arụ ọrụ na mgbasa ozi na ha ga-azụta n'aka ụlọ ọrụ nke ndị isi ha metụtara na mgbasa ozi.
Ikpeazụ, ma ọ bụghị mgbazinye, ndị ọrụ nwere ekele maka onye isi na-eji usoro mgbasa ozi. 78% nke ndị ọrụ kwuru na ha ga-arụ ọrụ maka onye isi na-etinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta na 81% lere ha anya dị ka ndị isi zuru oke. Ndi mmadu 93% kwenyere na ndi isi ochichi ndi mmadu ka akwadoro nsogbu.
Tags: CEOExecutiveelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketing
Alden Dale (@OluchiO)
Ọkt 16, 2014 na 6:50 PM
Na Intro Ọnọdụ… “naanị 1 na 5 CEOs” nwere ike ịbụ eziokwu. Nchịkọta mgbasa ozi ọha na eze na ọnọdụ ọ bụla dị elu. Ikekwe “naanị 1 na 5 CEO si n'ihu ọha udeme ha SM akaụntụ” ma m ike ikwere na 4 nke 5 CEOs araparawo 1994 XNUMX ma ọ bụ ma eleghị anya, m na dị nnọọ na ụlọ ọrụ ndị na digitally plugged na CEOs?
Ọkt 16, 2014 na 7:55 PM
Ekwetaghị m na ndị isi na-arapara na 1994, echere m na ọtụtụ n'ime ha ahụghị uru itinye oge na mgbasa ozi mmekọrịta. Anyị ga-ekerịta ụfọdụ nsonaazụ sitere na DOMO na-achọpụta na ọ pere mpe ka ị banyere na ụlọ ọrụ Fortune 500 - naanị 8.3%.
Ọkt 17, 2014 na 11:58 AM
Nke ahụ dị nzuzu. Agaghị m eche na; maa ihe na-iburu n'uche mgbe ewu si asịwo personas nakwa. Daalụ maka nnukwu ozi ahụ!